I-P3 UHD yangaphakathi yeVidiyo yeDVD
Uhlobo lweMveliso: P3
Izicelo: Ukubonwa komsindo
Ubukhulu: 576 * 576MM
p2 / p3 Ukubonisa okuncinci kwe-LED
Njengokuphuhla okukhawulezayo koqoqosho, abantu baxhalabile ngakumbi ekucebiseni ngobomi babo bokomoya, iTV encinci kunye neLCD azisakwazi ukuhlangabezana neemfuno zabo kwakhona. Imisebenzi emininzi yolonwabo kunye nemisitho ihlelwe yonke imihla, enje ngeeklabhu ze-DJ, amaqela, iikonsathi, iminyhadala yeentlanganiso zenkomfa. Umboniso omkhulu wokuqeshisa okhokelayo wenza ukuba yonke into esebenzayo kunye neziganeko zikhanye ngombala ofanayo wevidiyo, ukukhanya okuphezulu, ukujonga ngokubanzi kunye nembono, ukusasazwa bukhoma kweempawu ezikhoyo. Ukugxila kwe-MPLED ekuboneleleni ngemiboniso ephezulu yangaphakathi / yangaphandle yokurhola umboniso ukusuka kwi-P3 ukuya kwi-P10 kubathengi kumashishini osasazo kunye nokuzonwabisa, benze iiprojekthi ezininzi eziyimpumelelo kwihlabathi liphela.
· Iimpawu zeMveliso
1. Ukubonisa imifanekiso ecacileyo necacileyo enesisombululo esiphezulu.
2.Ukulingana okufanelekileyo ngombala kusombulula ingxaki ye-mosaic kakuhle.
3. Itekhnoloji ephezulu yemveliso iqinisekisa umgangatho kunye nobomi bevidiyo ye-LED eludongeni.
4. Udonga lwevidiyo ye-LED yamkela isoftware edlalwa ngokudlala ukuze iququzelele ukusebenza kwenkqubo.
5. Kulula ukugcinwa, kwaye unokulungisa inqaku elinye ukugcina iindleko zolondolozo.
6. Inesiphumo esihle sokubonisa kwimifanekiso kunye nonobumba ngenxa yokusebenzisa itekhnoloji ye-pixel yokwenyani
Ngezibane ze-LED eziqaqambileyo kunye neqokobhe leplastiki ekumgangatho ophezulu.
Easy ukufaka kwaye ibattery
Ukugcinwa kwesibane esisodwa
Ukuqhuba i-LED ngemowudi engapheliyo, ukukhanya okufanayo, kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi
Ubungakanani bepikseli yi-3mm, eneepikseli ezingama-64 * 64. I-pixel nganye ine-1R1G1B.
Izikrini ze-P3 ezipheleleyo zombala we-LED ezi-programmable ze-LED ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo: uxande, isikwere, ukujikajika, ukujikeleza kunye nolunye uyilo lwesiko.
Umbala ogcweleyo we-P3 wesikrini se-elektroniki esinokuxhasa amakhadi olawulo kunye neekhadi zolawulo zeasynchronous ngaxeshanye; Nokuba imeko yolawulo lokungaphumeleli kwekhompyuter, isengabonisa ngesiqhelo.
Ukufakwa kwesakhelo sesakhiwo sentsimbi: ngaphakathi I-P3 i-LED ebonakalayo yombala opheleleyo sisakhelo sesinyithi esikhanyayo, ikhemikhali i-rivet bolt rivet ipleyiti yesinyithi isetyenziswa njengesakhelo senkxaso kwi-boram ehambelana nayo kunye nenxalenye yekholamu, kwaye isakhelo sesinyithi sokubonisa sidityaniswe ne-rivet isitya.
Inkqubo yesikrini esipheleleyo se-P3 ye-LED isebenza ngokuzinzileyo nangokuthembekileyo, inamandla okulwa nokuphazamiseka, kwaye isebenza ngokuqhubekayo ngaphezulu kweeyure ezingama-72. Inkqubo yolawulo yesoftware yokusebenza iyasebenziseka kwaye kulula ukuyisebenzisa.
I-P2 encinci yePikitch Pitch Ukubonisa okungaphakathi kwe-LED
I-P2.5 Indonga yeVidiyo ye-LED yangaphakathi